နီကိုလာ ပဲလိုး - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ CERN တွင် နီကိုလာ ပဲလိုးနှင့် တင်မ်ဘာနာလီးကို သူတို့၏ ရုံးခန်းတွင် တွေ့ရပုံ
နီကိုလာ ပဲလိုး သည် တင်မ် ဘာနာလီနှင့်အတူတကွ CERN တွင် WWW Project ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အဖွဲ့ဝင်များတွင် တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်သည်။ ထိုစီမံကိန်းတွင် ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် စတင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ Leicester Polytechnic (ယခု De Montfort တက္ကသိုလ်) တွင် ဘွဲ့ကြိုသင်္ချာကျောင်းသူ ဖြစ်စဉ်အချိန်က ဖြစ်သည်။ ပဲလိုးသည် ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားတွင် အတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည့် အနည်းငယ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူမသည် Pascal နှင့် FORTRAN ဘာသာစကားများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
တင်မ်ဘာနာလီသည် NeXT ပလင်ဖောင်းအတွက် WorldWideWeb ဘရောက်ဆာကို ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် ပြီးစီးခဲ့သည်။  ပဲလိုးသည် C ပရိုဂရမ်းမင်းဖြင့် ဘရောက်ဆာတစ်ခုကို ဖန်တီးရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။  သူမသည် Line Mode Browser  ကို ရေးသားခဲ့ကာ NeXT စနစ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။  WWW အသင်းသည် သူမ၏ လုပ်ငန်းများကို တိုးတက်စေရန် စတင်ခဲ့သည်။  အမျိုးမျိုးသော စမ်းသပ်ဗားရှင်းတို့ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။
သူမသည် CERN မှ ၁၉၉၁၊ ဩဂုတ်လတွင် ထွက်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဘွဲ့ရပြီး ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ပြန်လာခဲ့သည်။ MacWWW ကို Robert Cailliau နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။  MacWWW သည် classic Mac OS တွင်အသုံးပြုနိုင်သည့် ပထမဆုံးသော ဘရောက်ဆာ ဖြစ်သည်။ 
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ Ten Years Public Domain for the Original Web Software။ CERN။ 21 July 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ Gillies, James; Cailliau, R. (2000). How the Web was Born: The Story of the World Wide Web. Oxford University Press, 6. ISBN 0192862073။
↑ A screenshot from TBL's first web browser
↑ A view from Nicola Pellow's line mode browser
↑ ၅.၀ ၅.၁ Dream team of web developers to recreate line-mode browser | CERN။
↑ Berners-Lee, T.J. (1992). "The World-Wide Web". Computer Networks and ISDN Systems 25: 458.
↑ Lasar၊ Matthew (2011-10-11)။ Before Netscape: the forgotten Web browsers of the early 1990s။ Ars Technica။ 2014-01-08 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Isaacson, Walter (2014-10-07). The Innovators: HowaGroup of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution (in en). Simon and Schuster, 415. ISBN 9781476708713။
↑ MacWWW: the first web browser for the Apple Macintosh platform။
↑ Screenshot of the first Mac web browser
↑ Stewart၊ Bill (2015)။ Web Browser History။ Living Internet။ 21 March 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Berners-Lee၊ Tim (3 November 1992)။ Macintosh Browser။ World Wide Web Consortium။2June 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နီကိုလာ_ပဲလိုး&oldid=387188" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇၊ ၁၃:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။